lundi, 30 mai 2016 08:53
Ambatondrazaka: Nanofana kartie mobil ny fitondrana
Vatandehilahy miisa 469 no nomena fiofanana hiandraikitra ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokotany ao anatin'ny distrika Ambatondrazaka, Amparafaravola ary Tsaratanàna. Naharitra 15 andro ny fiofanan'izy ireo ka ny alakamisy teo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena mihitsy no nidina taty Ambatondrazaka nanolotra azy ireo tamin'ny vahoaka.
samedi, 28 mai 2016 12:12
Ambatondrazaka: Variana mifanenjika ny mpomba ny fitondrana
Miasa mangina ireo mpanara-dia an'i Andry Rajoelina Miezaka manantona vahoaka hatrany ny fikambanana CSANR na ny Club Suporter Andry Nirina Rajoelina aty Ambatondrazaka.
samedi, 28 mai 2016 11:32
Malamavato Sambava: Mpimoasy mpanolan-jaza
Mpimoasy iray tao Malamavato Kaominina ambanivohitra Antindra no nilaza ho mahay fomba mahahafa-panadinana.
samedi, 28 mai 2016 11:07
Analampotsy Sambava: Voakapan'ny famaky ny lohan'ny Filohan'ny Fokontany teo aloha saika angalatra lavanila
Ny Filohan’ny Fokontany teo aloha tao Analampotsy Kaominina ambanivohitra Andratamarina, dia voakapan'ny famaky tao anaty alan-davanila ny alarobia 25 mey lasa teo tokony tamin’ny 7 ora alina.
samedi, 28 mai 2016 09:54
SAVA: Zaza tsy ampy taona bevohoka
Nanaitra ny nahitana ny firoboroboan'ireo zaza tsy ampy taona takatra ny vohoka tsy nirina aty amin'ny faritra SAVA, nandritra ny fanokafana ny herin'andron'ny reny sy ny zaza natao tany Antalaha tamin'ny alatsinainy 23 Mey 2016 lasa teo izany.
jeudi, 26 mai 2016 22:42
Sary Sobika Mandritsara
Ambalakirajy Mandritsara: Niverina amin'ny Malagasy ny taniny ary voaroaka ny Sinoa
Novakian'ny Lehiben'ny Distrika teo anatrehan'ny solotenampokon'olona miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ny taratasy (message) avy any amin'ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany MAMPIATO ny asa fikarohana ataon'ireo Sinoa ato anatin'ny distrikan'i Mandritsara.
jeudi, 26 mai 2016 22:10
Anjinjaomby Sambava: Ny mpilaza ny marina indray no tadiavina gadraina
Norahonan’ny Benin’ny Tanàna Kaominina ambanivohitra Anjinjaomby fa hogadraina mandra-pahafaty ity Rai-mpianakaviana iray antsoina hoe Judicael 34 taona, rehefa nandeha nanome vaovao maro-pototra an'ity mpitondra ity.
jeudi, 26 mai 2016 22:04
Antsirabe: Fakana ankeriny Karana
Niakatra fampanoavana ary notanana am-ponja vonjimaika ireo jiolahy mpaka ankeriny teratany karana iray teto Antsirabe. In-droa niatoana ny fiakarany fampanoavana dia ny faha 25 mey ny voalohany ho an'ilay voalaza fa tompon'antoka tamin'ny "Operation", ka voalaza fa ny resaka fikasana hitsoaka no nakana am-bavany azy, izay nitazonana azy ho MD avy hatrany izany.
jeudi, 26 mai 2016 14:45
Fiangonana Loterana Andranomanelatra Antsirabe: Misavorovoro ny mpino
Raikitra ny savorovoro sy ny fitokonana ho an'ny mpino Loterana ao amin'ny Fitandremana Andranomanelatra Antsirabe ny alahady teo. Tsy nanaiky ny fanovana ny mpitandrina ny mpino sasany raha toa ka nanao amboletra ny mpitondra fileovana hametraka ny mpitandrina vaovao. Nambaran'ireo nanohitra izany fa tsy nisy olana ny mpitandrina no sady nampandroso ny fiangonana ka tsy hitan'izy ireo izay hanesorana azy. Ho an'ny mpitondra fileovana kosa dia fandaminan'ny Sinoda ny famindrana ny mpiasa miasa eo aminy ka tokony hankato izany ny mpitandrina soloina sy ny Krisitianina. Nohidian'ireo mpino moa ny varavaram-piangonana ka teo ivelany ny mpitandrina vaovao no napetraka sy nitarika fotoam-bavaka ny alahady 22 mey teo.
jeudi, 26 mai 2016 14:36
Kaominina Antsirabe Renivohitra: Nahazo fitaovana avy any dilam-bato
Nahazo fitaovana maro indray ny Kaominina Antsirabe voalohany vokatry ny firaha-miasa amin'ny fikambanana Tanamasoandro. Ny fikambanana Taramasoandro, izay misahana ny fanohanana ireo ankizy sahirana ara-pivelomana sy ara-panabeazana ireny. Fitaovana fialam-boly ho an'ny kilonga avy any amin'ny kaominina Hagondange-Luxembourg, Frantsa ireto natolotra ireto mba ahafahana manangana toeram-pialamboly maharitra sy manaram-penitra toy ireny any an-dafy ireny ka nambaran'ny ben'ny Tanàna Paul Razanakolona fa ho eo Andranomafana no hametrahana azy ireo aorian'ny fanavaozana ny "Espace Maikita" izay efa eo. Namafisin'ny Ben'ny Tanàna fa noho ny fiaraha-miasan'izy ireo tamin'ny fikambanana, izay efa nisy fony izy Lehiben'ny faritra izao mitohy amin'izy Ben'ny Tanàna izao indray. Ankoatry ny fitaovana ho an'ny Kaominina dia nisy ny lamba ho an'ireo ankizy ahian'ny fikambanana ary fitaovanam-pitsaboana ho an'ny Hopitaly Loterana Malagasy, toy ny fandriana, fanafody sy ireo maro hafa, izay efa naloan'ny fikambanana nanolotra, ny fanomezana ny saran'ny nandefasana azy sy ny haba teny amin'ny seranana.
Page 141 sur 170